नेपाली समाज कुँजो बन्दै छ : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
नेपाली समाज कुँजो बन्दै छ
[0] October 11, 2009	| Bhuvan Devkota
देश र दुनियाँलाई लुटेर सिसमहल ठड्याउनेहरूलाई सबैले आदरणीय र ठूलो मानेकोले केहीको प्रेरणा त्यही कुरा बन्दै छ। राजनैतिक वा अन्य व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थको लागि किशोरहरूको प्रयोग गर्ने डरलाग्दो चलन बढेको छ। मोटरबाइक, मोबाइल र मस्ती नै जीवन हो भन्ने भ्रामक शिक्षाले नेपाली किशोर पुस्तामा आपराधिक मनोवृत्तिले जरो गाड्न थालेको छ। कानुनले शासन गर्न बिर्सन थालेको छ।
समाजको समानुपातिक र समग्र विकासमा समाजका अवयवहरूको सन्तुलित विकास अपरिहार्य हुन्छ। विकासको लागि शिक्षा र व्यक्तिको रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ। स्थानान्तरणले मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ तर साँचो परिवर्तन त आत्मामा परमेश्वरको ज्योति आएपछि मात्रै हुन्छ।
तर अहिले मिडिया र यावत् कुराहरूले हाम्रा किशोरीकिशोरीहरूलाई गलत बाटोमा लगिरहेका उदाहरण हाम्रा माझमा प्रशस्तै पाइन थालेका छन्। सम्भ्रान्त र पैसा हुनेहरू युरोप वा अमेरिकाको आरामी जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने अहिले गाउँका किशोरीकिशोरीहरूले तास होइन, मदिरको बोतल तान्न थालेका छन्। चुरोट र रक्सीबाट सुरु गरेर धेरैले आफ्नो जीवन लागूऔषधीमा समाप्त गर्न थालेका छन्।
पैसा वा पावर हुनेले जे गरे पनि हुने भन्ने नराम्रो थिति बस्न थालेको छ भने नाम र दाम कमाउन जेसुकै पनि गर्न मिल्छ भन्ने अर्को खतरनाक कुरा किशोर पुस्ताको मनमा हालिँदैछ। नेपाली किशोर पुस्ताले कि त चिहानकी परी भन्ने गीतमा रमाउन थालेको छ कि त खुल्ला समाजको नाममा अर्को सदोम र गमोरामा नाच्न सिक्न लागेको छ।
आधुनिकता भनेको मानिसको जीवन सरल र सहज हुनु हो भन्ने कुरा सिक्न मन नगरेर नाङ्गो भए वा सेक्सी देखिए मात्रै आधुनिक बनिन्छ भन्ने भ्रमको गहिराइमा धेरैले आफैंलाई घँचेटेका छन्। धेरैले नाम कमाउने नसामा धेरै किशोरकिशोरीलाई बिगार्ने गीतसङ्गीतको उत्पादन गरिरहेका छन्। रक्सी वा चुरोटको नसामा गाउने वा अभिनय गर्नेप्रति व|mेजी नेपाली किशोर पुस्ताले कस्तो सपना बुनेको छ?
यस्ता कुरामा घोरिँदा नेपाली समाजको भविष्य निकै विकराल देखिन्छ। हामीले इमानदार भएर स्वीकार्ने हो भने यी सबै कुराले नेपाली किशोर पुस्तालाई कुँजो बनाउँदै छ। यसरी समाजलाई गति दिने पुस्तालाई कुँजो बनाएपछि समुन्नत समाज त सपना मात्रै हुन्छ।
प्रभुका प्रिय जनहरू, हामीले यसरी समाज कुँजो बनेको देख्नेछ दिन कहिले आउँछ? सबै कुराको उपचार येशूको कोर्रराको चोटमा छ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा आसाको स्रोतको रूपमा राख्नुस भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। अब त मण्डली ब्युँझिनुपर्दैन र? नुन र ज्योति बन्ने समय आइपुगेन र?
« NBCBS Fifth National Conference Final
Pressing on to the Goal … »